किचन सिंक नल ब्रश निकेल पुल डाउन
भान्साको नल, भाँडो फिलर, बाथरूम नल
घर / भान्साको नल / नल तान्नुहोस् / WOWOW भान्सा सिंक नल ब्रश निकल पुल डाउन
वाह रसोई सि F्क नलहरु पुल डाउन निकल
रेटेड 5.005बाहिर आधारित 40 मूल्यांकन ग्राहक
(40 ग्राहक समीक्षा)
एकल प्वाल भान्साको नल उच्च चापका निम्न लाभहरू छन्:-360०-डिग्री घुमाव, सबै दिशामा मृत कोण बिना लचिलो सफाई;
पानी अधिक सुविधाजनक छ, र तातो र चिसो पानी स्वतन्त्र रूपमा स्विच गर्न सकिन्छ;
तपाईं मर्जीमा तापमान नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। विस्फोट प्रूफ स्टेनलेस स्टील ब्रेडेड नली, स्थापना गर्न सजिलो, उच्च तापमान र दबाव प्रतिरोध, एंटी-एजिंग।
2310700 स्थापना निर्देशनहरू
देश छान्नुहोस् अलान्ड टापुअफगानिस्तानअल्बानियाअल्जेरियाअमेरिकी समोआAndorraअङ्गोलाआङ्गुइलाअन्टार्कटिकाएन्टिगुवारबार्बुडाअर्जेन्टिनाआर्मेनियाआरूबाअष्ट्रेलियाअस्ट्रियाअजरबैजानबहामासबहराइनबंगलादेशबारबाडोसबेलारुसBelauबेल्जियमबेलिजबेनिनबर्मुडाभूटानबोलिभियाबोनाइर, सेन्ट इउस्टाटिउस र साबाबोस्निया र हर्जेगोविनाबोत्स्वानाबुभेट टापुब्राजिलबेलायतभारतसमुद्रीभूभागब्रुनाईबुल्गेरियाबुर्किना फासोबुरुन्डीकम्बोडियाक्यामरुनक्यानाडाकेप वर्डकेमैन द्वीपमध्य अफ्रिकी गणतन्त्रचाडचिलीचीनक्रिसमस आइल्याण्डकोकोस (कीलिंग) द्वीपकोलम्बियाकोमोरोसकंगो (ब्रज्जविल्ले)कंगो (किंशासा)कुक टापुकोस्टा रिकाक्रोएशियाक्युबाकुराकाओसाइप्रसचेक गणतन्त्रडेनमार्कडिजिबुटीडोमिनिकाडोमिनिकन गणतन्त्रइक्वेडरमिश्रएल साल्भाडोरइक्वेटोरिअलगिनेआइरिट्रियाइस्टोनियाइथियोपियाफकल्याण्ड टापुफारोईद्वीपफिजीफिनल्याण्डफ्रान्सफ्रेन्चगिआनाफ्रेन्चपोलीनेसियाफ्रान्सेली दक्षिणी क्षेत्रगावोनगाम्वियाजर्जियाजर्मनीघानाजिब्राल्टरग्रीसग्रीनल्याण्डग्रेनेडाग्वाडेलोपGuamग्वाटेमालागुएर्नेसीगिनीगिनीबिसाउगुयानाहैटीसुने र म्याकडोनाल्ड टापुHondurasहङकङहंगेरीआइसल्याण्डभारतइन्डोनेशियाइरानइराकआयरल्याण्डमानिसको आइलइस्राएलकाइटालीआइभोरी कोस्टजमाइकाजापानजर्सीजोर्डनकाजाकिस्तानकेन्याकिरिबातीकुवेतकिर्गिस्तानलाओसलाटवियालेबनानलेसोथोलाइबेरियालिबियालिएखटेन्स्टाइनलिथुआनियालक्जेम्बर्गमकाउमडागास्करमालवीमलेसियामाल्दिभ्समालीमाल्टामार्शलद्वीपमार्टीनिकमाउरिटानियाMauritiusमायोटीमेक्सिकोमाइक्रोनेशियामाल्डोवामोनाकोमङ्गोलियामोन्टेनेग्रोमोन्टसेर्राटमोरक्कोमोजाम्बिकम्यानमारकोनामिबियानाउरूनेपालनेदरल्यान्ड्सनयाँ कैलेडोनियान्यूजील्याण्डनिकारागुवानाइजरनाइजेरियानियूNorfolk Islandउत्तर कोरियाउत्तरी म्यासेडोनियाउत्तरीमारिआनाद्वीपनर्वेओमानपाकिस्तानप्यालेस्टिनी क्षेत्रपानामापापुआ न्यु गिनीप्यारागुवापेरुफिलिपिन्सपिटकेर्नपोल्याण्डपोर्चुगलप्युर्तोरिकोकतारपुनर्मिलनरोमानियारूसरवांडासाओ टोमे र प्रिन्सेपसेन्ट बार्थेलेमीसेन्ट हेलेनासेन्ट किट्स र नेविससेन्ट लुसियासेन्ट मार्टिन (डच भाग)सेन्ट मार्टिन (फ्रान्सेली भाग)सेन्टपियरएन्डमिक्वेलनसेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिन्ससामोआसानमारिनोसाउदी अरबसेनेगलसर्बियासेचिलिससियरा लियोनसिंगापुरस्लोभाकियास्लोभेनियासुलेमान द्वीपसोमालियादक्षिण अफ्रिकादक्षिण Georgia / स्यान्डविच द्वीपदक्षिण कोरियादक्षिण सुडानस्पेनश्रीलंकासुडानसुरिनामस्वाल्बार्ड र मेयनस्वाजील्याण्डस्वीडेनस्विट्जरल्याण्डसिरियाताइवानताजिकिस्तानतान्जानियाथाईल्याण्डटिमोर-लेस्टेटोगोतोगोटोंगात्रिनिदाद र टोबागोटुनिशियाटर्कीतुर्कमेनिस्तानतुर्करकैकोसद्वीपतुभालुयुगान्डायुक्रेनसंयुक्त अरब एमिरेट्ससंयुक्त राज्य (बेलायत)संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका)संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका) माइनर आउटलाइंग द्वीपउरुग्वेउज्बेकिस्तानभानुतुभेटिकनभेनेजुएलाभियतनामभर्जिन टापुहरू (ब्रिटिश)भर्जिन टापुहरू (अमेरिका)वालिसएन्डफुटुनापश्चिमी सहारायमनजाम्बियाजिम्बाब्वे
Ktchen ट्याप स्प्रे २2310700१०XNUMX०० पुल आउट गरेर
तपाईको भान्छाको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधाहरु के हो? धेरैले भान्छाको ट्यापलाई उत्तर दिन्छन् किनकि यो वस्तु दिनको दर्जनौं पटक प्रयोग गरिन्छ। यसबाहेक, भान्छाको ट्यापहरू प्राय: भान्छाको मुख्य केन्द्रबिन्दु मानिन्छ। तपाईंको भान्छाको शैली जस्तोसुकै। केहि कारणका लागि सबैको ध्यान स्वाभाविक रूपले भान्साको ट्यापबाट खिचिन्छ। तपाईको नयाँ किचन डिजाइनका लागि सहि किचन ट्याप छनौट गर्न अझ बढी कारणहरू। गलत छनौटले तपाईंको भान्साको डिजाईनबाट सबै सन्तुलन लिन सक्दछ, वा तपाईं भान्साको ट्याप चयन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको कार्यक्षमताको सर्तमा तपाईंले अपेक्षा गरेको कुराको प्राथमिकता अनुरूप छैन। अन्तमा, गुण निश्चित रूपमा ध्यान नलगाईन्छ। एक सजिलैले देख्न सक्दछ कि गुणस्तरको भान्साको ट्याप के हो र कुन होइन।
तर तपाईं कसरी गुणवत्ता याद गर्नुहुन्छ? तपाईले किचनको ट्यापको गुणस्तर औसत भन्दा माथि छ वा छैन भनेर जाँच्न बर्षौंसम्म भान्छाको ट्याप प्रयोग गर्नु पर्छ। तपाईं सजिलैसँग यस वारंटी अवधि सँग याद गर्न सक्नुहुनेछ भान्सेको ट्याप निर्माताले तपाईंलाई प्रदान गर्दछ। एक आपूर्तिकर्ता जसले १-वारेन्टी प्रदान गर्दछ केही वर्ष पछि केहि समस्याहरूको आशा गर्न सक्दछ। तसर्थ उहाँ लागत बचत गर्नका लागि लामो वारेन्टी अवधि प्रस्ताव गर्न चाहनुहुन्न। अर्को तर्फ, एउटा भान्छाको ट्याप आपूर्तिकर्ता जसले प्रदान गर्दछ a
-बर्षे वारंटी अवधि, यसको उत्पादनलाई विश्वास गर्छ र निश्चित रूपमा ती सबै बर्षहरूमा यसको प्रदर्शनको लागि यसको उत्तरदायित्व लिन चाहन्छ। मानिसहरूले सोध्न सक्छन्, किन 5-वारेन्टी छैन? खैर, एक भान्साको ट्यापको प्रदर्शन पनि यसको प्रयोग, यसको मर्मत गर्ने र पानीको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ। भान्साको ट्यापहरू सजिलैसँग १० बर्ष भन्दा लामो समय सम्म रहन सक्छ, तर पानीको राम्रो मर्मतसम्भार र नियन्त्रणले लामो जीवन सहनशीलता ग्यारेन्टी गर्नु राम्रो हुन्छ।
स्प्रे किचन ट्याप बाहिर तान्नुहोस्
धेरै व्यक्तिले अन्य कुनै पनि किन्च ट्यापमा स्प्रे किचन ट्यापलाई बाहिर तान्न रुचाउँदछन्। मुख्य कारण यो हो कि तपाईं वास्तवमा कुनै पनि बिन्दुमा पुग्न सक्नुहुनेछ तपाईंको भान्सा सिink्क वा वरपर। यस तरिकाले, तपाईंको भान्साको सफाई अर्को भान्साको ट्यापको साथ सजिलो गर्न सकिदैन। पानी नलीको साथ तपाई सजिलैसँग आफ्नो पहुँच side२ इन्चको साथ प्रत्येक छेउमा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य भान्साको ट्यापको साथ तपाईं कहिले पनि यो दूरीमा पुग्न सक्नुहुन्न, त्यसैले यसलाई सफा गर्न धेरै असुविधाजनक हुनेछ। यस पुल-आउट स्प्रे किचन ट्यापको साथ तपाईं आफ्नो आँखा झिम्काएर तपाईंको भान्साको घर सफा गर्नुहुनेछ।
एकीकृत पुल आउट स्प्रे किचन ट्यापको ठूलो फाइदा यो हो कि यो सुन्दर देखिन्छ र तपाईंले सायद याद गर्नुभयो कि तपाईंसँग लगभग''११ पानी नलीमा पहुँच छ '। यसले WOWOW को स्प्रे किचन ट्यापलाई बाहिर निकालेको मात्र नियमित भान्साको ट्याप जस्तो देखिन्छ। जब तपाईं नजिक हेर्नुहुन्छ, तपाईं सायद एक मानक किचन ट्यापबाट फरक देख्नुहुनेछ। तर जब तपाईं यस स्प्रे किच ट्यापको स्प्रे टाउको तान्नुहुन्छ, तपाईंले अचानक याद गर्नुभयो कि तपाईंको हातमा फिर्ता लिन योग्य पानीको नली छ। र तपाई यसको लम्बाई देखेर छक्क पर्नुहुनेछ! पानीको नली प्रयोग गरेपछि, यो स्वचालित रूपमा आफ्नो मूल स्थितिमा फिर्ता लिन्छ, जस्तो कि केही पनि भएको छैन। यसको लचिलो पानीको नली र काउन्टरवेटको साथ यो सहज फिर्ता कार्यक्षमता आश्चर्यजनक डिजाइन गरिएको थियो, तपाईं एकैचोटि देख्नुहुनेछ।
एक पुल आउट स्प्रेको साथ मर्मत भान्साको ट्याप गर्नुहोस्
कसलाई भान्छाको नल कायम राख्न मन पर्छ? हामी अनुमान गर्दैनौं। रखरखाव तथापि यो वास्तवमा भन्दा गम्भीर लाग्दछ। भान्साको ट्यापको साथ तपाईले गर्नु पर्ने सबै भन्दा महत्वपूर्ण मर्मतसम्भार सफा गर्नु हो। पक्कै पनि एकले भान्छाको ट्यापबाट पकाएपछि फोहोर हटाउनु पर्छ। यस तरिकाले तपाईं भान्छाको ट्यापको कोपिंगलाई उत्तम आकारमा राख्नुहुन्छ। यो जस्तो तपाईको भान्साको नल चम्किरहेको छ यो अझै नयाँ ब्राण्ड जस्तो छ। यसका साथै किचनको ट्याप स्प्रे हेडबाट सबै कडा पानीको बाँकी अंश हटाउनु महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी जब तपाईं त्यस्तो क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ जहाँ पानी सामान्य भन्दा गाह्रो छ। यसको मूल अर्थ यो छ कि पानीमा धेरै चाक हुन्छ। यसले प्रत्येक प्रयोग पछि भान्छाको ट्यापमा केही अवशेष छोड्छ। त्यो कुनै पनि समस्या छैन, जब सम्म तपाईं यसलाई बारम्बार सफा गर्नुहुन्छ।
यदि तपाईंले गर्नुहुन्न भने, चक लगातार निर्माण हुनेछ र अन्तमा यसलाई हटाउन सजिलो हुनेछैन। यसले भल्भहरू, लिभरहरू र भान्साको ट्यापको स्प्रेको प्रदर्शनलाई असर गर्न सक्छ। विशेष गरी जब तपाईंसँग स्प्रे किचन ट्याप तानिन्छ, तपाईं अब र तपाईंको गाउँको भान्साको ट्यापलाई गहिरो रूपमा सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि सबै अवशेषहरू सजीलो र राम्रोसँग हटाइएको छ र तपाईंको पुल आउट स्प्रे किचेन ट्यापको जीवन-लामो उच्च प्रदर्शनको ग्यारेन्टी गर्न।
कार्यक्षमता स्प्रे किचन ट्याप बाहिर खींच
कार्यक्षमता बाहेक, यो स्प्रे किचेन ट्याप स्टाइलिश डिजाइन गरीएको छ। उच्च चापको आकारले तपाईंलाई एकै समयमा भव्यता र व्यावहारिक ठाउँ प्रदान गर्दछ। ब्रश निकल फिनिशले यस स्प्रे किचन ट्यापलाई पनि एक अद्भुत शैली दिन्छ। यो कुनै पनि रेस्टुरेन्ट वा होटेलमा फिट हुनेछ, तर तपाईंको भान्साकोठामा निश्चित रूपले त्यो उत्थान दिनुहुन्छ जुन तपाईं खोजिरहनु भएको थियो।
कार्यक्षमताका बारे, यसले स्प्रे किचेन ट्यापले तपाईंलाई पानीको भान्सा सफा गर्ने बेलामा तपाईंलाई चाहिएको आराम प्रदान गर्न तीन पानी कार्य गर्दछ। तपाईं स्प्रे हेडमा विशेष बटनको साथ पानीको धारा पनि रोक्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले तपाईले लिभरलाई छुनुपर्दैन जब तपाईं केवल एक सेकेन्डको लागि पानी समात्नुहुन्छ। पानीको तापक्रम र पानीको चाप समायोजन गर्न लीभर एकलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिन्छ। किचन ट्यापको degrees 360० डिग्री रोटेशन समारोहको साथ तपाईं साँच्चिकै सबै ठाउँमा पुग्न सक्नुहुनेछ।
वारेन्टी स्प्रे किचन ट्याप बाहिर
यो उच्च-अन्त पुल आउट स्प्रे भान्साको ट्याप उच्च-गुणवत्ता काँसाका सामग्रीहरूले बनेको थियो। त्यसकारण WOWOW तपाईलाई-बर्षे ग्यारेन्टी अवधि र-० दिनको पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी प्रदान गर्न आश्वस्त छ। हाम्रो आत्मविश्वास निश्चित रूपले तपाईलाई पैसाको मूल्यको बारेमा निश्चित गर्नुपर्दछ हामी तपाईलाई यो स्प्रे किचेन ट्यापको साथ प्रस्तुत गर्दैछौं।
संक्षेपमा स्प्रे आउट स्प्रेको साथ भान्साको ट्यापका फाइदाहरू:
Spray स्प्रे पुल आउटको कारण फराकिलो पहुँच
Leg सुरुचिपूर्ण र न्यूनतम डिजाइन
 तीन सजिलो पानी कार्यहरू
Oth महीन वापसी टेक्नोलोजी
High उच्च गुणस्तरीय ब्रास सामग्रीबाट बनेको
SKU: १2310700००।। विभाग: भान्साको नल, नल तान्नुहोस् टैग: बाहिर तान्नुहोस्, एकल हैंडल, स्प्रे
म खुशीले यस उत्पादनको साथ चकित भए। मलाई लाग्छ कि यो चीनले बनेको छ, तर म बीचको भान्साको नलको बीचमा थिएँ। मैले अर्को नाम ब्रान्डको नलको साथ नाम ब्रान्डको नल बदलें र समाप्त क्र्याक अफ भएको कारण २ वर्ष भित्र ह्यान्डल बदल्नु पर्ने भयो। एक वर्ष भन्दा कम पछि, ह्याण्डलले फेरि यो गर्‍यो। मैलेfगुणा रकम खर्च गर्नु भन्दा पहिले मैले यस नलको लागि गरेको थिएँ, मैले सोचें कि मैले यो समयका लागि खरीद गरें। मलाई अनुसन्धानको लागि थप समय चाहिएको थियो, तर एउटा कार्यकारी नलको आवश्यकता छ। जब यो आइपुग्यो, म निर्माण गुणको साथ चकित भएँ, किनकि यो मेरो नाम ब्रान्ड एकमा निर्माण गुणवत्ता भन्दा कम थिएन। भागहरू धेरै मानक थिए, तर मलाई लाग्दैन कि प्रतिस्थापन भागहरू खरीद गर्दा यो विकल्प हो। भनिएको छ, यस मूल्यको लागि, मैले सोचे कि यो एक डिस्पोजेबल विकल्प थियो जब यो भाँचियो। यदि यो मेरो एक वर्ष टिक्यो, म खुशी हुनेछु। अहिले सम्म, धेरै राम्रो। यसले निर्धक्क भएर काम गरिसकेको छ र स्थापना कुनै पनि व्यक्तिको लागि राम्रो मानक / सजिलो छ। स्थापनामा मलाई एक घण्टा लाग्यो, तर धेरै जसो समय खर्च गरिएको थियो सि under्क मुनि सफा गरेर र पुरानो नल हटाउनु। मैले यो २ महीनाको लागि गरिसकेको छु र पानीको स्प्रे दुबै प्रकारकामा राम्रो छ। किनकि यो हटाउन सकिने टाउको हो, त्यसैले मैले नलको बाहिरी भागमा सुरक्षित गर्दा उचित प्लेसमेन्ट सुनिश्चित गर्न नलीमा थप वजन पनि गरें। कि सहायता भइरहेको छ, वजन राम्रो संग सुरक्षित छ, मेरो अघिल्लो faucet कि चिप्लन बनाए भन्दा धेरै राम्रो छ। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि स्प्यार हेडसँग चुम्बकीय स्प्रेयर छैन र वजन भनेको यसलाई सुरक्षित गर्दछ। समग्रमा, म निर्माण मूल्य, सौन्दर्य प्रसाधन, र यस मूल्य बिन्दुको लागि सुविधाहरूसँग खुसी छु। यो ठूलो मूल्य हो। म सिफारिश गर्दछु।
मैले भर्खरै मेरो बिल्डर अपग्रेड मोन नल ($ २$०) लाई WOWOW किचन नल एकल ह्याण्डल किचन सिंक नलको साथ ब्रश निकल कमर्शियलमा पुल डाउन स्प्रेयरको साथ बदलें। जे भए पनि Moen नयाँ (नयाँ घर) थियो यसको उपयोग गर्न भयानक थियो।
यो वाह नल सुरुचिपूर्ण, चिल्लो र प्रयोग गर्न सजिलो छ। WOWOW मोन भन्दा एक धेरै राम्रो बनाइएको एकाई हो र एक साँच्चै प्रतिस्पर्धी मूल्य मा। स्थापना अधिक सुरक्षित छ र ढीला छैन।
Months महिना खर्च गरेपछि तापक्रम प्राप्त गर्न प्रत्येक पटक संघर्ष गरें र प्रत्येक पटक मेरो भान्छाको सिink प्रयोग गरेपछि म मुस्कुराउँछु कि पानीको तापक्रम सेट गर्न कत्ति सजिलो छ र सहज र सटीक ह्यान्डलको साथ ठीक प्रवाह गर्दछ।
पुल-डाउन स्प्रेयर आकर्षणको रूपमा काम गर्दछ र हंस घाँटीमा फर्कन्छ जुन यसलाई घर नगरीकन,
पाँच तारा सबै राउन्ड
वाह नल तुरुन्तै आइपुग्यो र सुरक्षित रूपमा प्याकेज गरीएको थियो त्यसैले केही पनि स्क्र्याच वा डेन्टेड गरिएको थिएन। नल सुन्दर छ! यो आधुनिक र कडा छ। उत्कृष्ट गुण र एक ठूलो मूल्य। स्थापना सजिलो थियो र--होलको नल हाम्रो पुरानो सिink्कमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ। यस नलले हामीलाई धेरै कडा पानीको दबाव दिन्छ। मलाई मात्र मन पर्छ! म हाम्रो बाथरूमको लागि अतिरिक्त faucets खरीद हुनेछ र यो कम्पनी पहिले हेर्न को लागी तिनीहरूले उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान गरेको छ।
हाम्रो पुरानो एकदम सानो र असुविधाजनक थियो। यो भान्छाको नलले मार्छ। मैले पाया कि यो नल अन्य प्रसिद्ध ब्रान्ड भन्दा सस्तो थियो। नल पूर्ण रूपमा प्याकेज र निर्देशनहरू सहित आयो। स्थापना सजिलो थियो र तपाईंले यसलाई धैर्यतापूर्वक गर्नु पर्छ। स्प्रे हेड सिंक अन्तर्गत स्थापित वजन द्वारा ठाउँमा राखिएको छ। पानीको चाप स्थिर र चिल्लो हुन्छ। यो नियन्त्रण गर्न सरल छ। यो अग्लो छ। त्यो हाम्रो मनपर्ने अंश हो। सबै कुरा धुने धेरै सुविधाजनक।
म 642बर्षको भएँ र २ घाँटी सर्जरी पनि भयो त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को अधीनमा रहनु मेरो लागि गाह्रो काम थियो तर भूतपूर्व मरीनको रूपमा मैले कहिल्यै हार स्वीकारेन! सकेसम्म धेरै सँगै स्थापना गर्नु अघि राख्नुहोस्! त्यो स्मार्ट तरिका हो!
अर्को एकलाई बाहिर लैजानुहोस् र सि area्क क्षेत्रको माथि सफा गर्नुहोस् र काममा जानुहोस्!
यदि तपाइँ निष्पक्ष, ह्य्यान्डम्यानमा राम्रो हुनुहुन्न, किनकि यससँग राम्रो निर्देशनहरू छैनन्, म एउटा प्लम्मर सुझाव दिन्छु अन्यथा तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ।
यो एक सुन्दर र अद्भुत नल हो! मेरी श्रीमतीले मलाई पनि मन पराउँछिन्। अन्य भान्साको नल केवल! बर्ष मात्र टिक्यो! म आशा गर्दछु यो लामो समय सम्म रहन्छ किनकि यो अझ राम्ररी निर्माण गरिएको छ!
यसले तलको भान्साको नलले हाम्रो तलको मदिरा पट्टी सिink्कलाई आधुनिक बनाउँदछ। नल स्थापना गर्न सजिलो छ। मलाई यसको degrees 360० डिग्री रोटेशन मन पर्छ जुन म सिink्कको प्रत्येक कुनामा धोउन सक्छु। साथै, एकल ह्यान्डल अपरेशनले मेरो जीवन सजिलो बनाउँदछ। म पानीको तापक्रम दक्ष रूपमा समायोजित गर्न सक्छु। मैले तिरेको मूल्यको लागि, यो नल योग्य छ।
यो नल अहिले मेरो घरमा लगभग एक महिनाको लागि स्थापित गरिएको छ र हाम्रो भान्छाको लागि उत्कृष्ट अपग्रेड भएको छ। स्थापना जत्तिकै सजिलो थिएन किनकि जोडिएको होजहरू एकदम छोटो थिए किनभने मैले प्लम्बिंगमा पुग्न अतिरिक्त होजहरू र संलग्नहरू प्राप्त गर्नुपर्‍यो।
नल राम्रो गुणमा, भारी, कडा, कपरीयस भित्री भित्र छ (कम्तिमा के म देख्न सक्छु), लामो र नरम नली। यो कति लामो समय सम्म देख्नेछ। फिर्ता आउनेछ मेरो टिप्पणी अपडेट गरीन्छ यदि कुनै मुद्दा छ।
मैले फेला पारे कि उनीहरूले हालै स्थापना भिडियो अपलोड गरेको छ, जुन एकदम स्पष्ट छ। स्थापना हुनु अघि यसलाई हेर्नु पर्छ।
मेरो ट्रिक: तपाईंले छेउमा ह्यान्डलको साथ स्थापना गर्न आवश्यक छैन। वास्तवमा म मनपर्दछ र अगाडीको ह्यान्डलको साथ स्थापना गर्छु, कुनै समस्या छैन। मैले कसैलाई स्थापना गर्न मद्दत गर्न आग्रह गरे। स्थापना वास्तवमा धेरै सजिलो छ। तर मेरो समस्या यो छ कि मसँग मूल नललाई डिमाउन्ट गर्ने उपकरणहरू छैन, जुन नराम्ररी खियायो।
म मेरो नयाँ नल संग धेरै प्रभावित छु! मलाई थाँहा मात्र थाहा थियो कि ती प्रसिद्ध ब्रान्ड भन्दा १$० कम थिए त्यसैले मैले प्रयास गर्नु पर्‍यो। स्थापना सरल थियो र पेशेवरलाई कल गर्न आवश्यक पर्दैन। यस नल धेरै राम्ररी काम गर्दछ। $ 130 को लागि त्यहाँ वास्तवमा गुनासो गर्न धेरै छैन।
आर *** बी2020-07-18
मैले $ like० तिरेको छ? मैले $ १२० र अधिकको लागि उस्तै नल देखेको छु। मैले समय खर्च गरे र घण्टा पुरानो लाई बाहिर तानिरहे, तर यो १० मिनेट वा भित्रमा गए। निर्देशनहरू अस्पष्ट थिए, तर मैले केहि भन्दा बढि परिवर्तन गरें र तिनीहरूलाई आवश्यक भएन। छिटो डेलिभर, राम्रो वजन, मिठो देखिन्छ!
ई *** ई2020-07-20
मैले यसलाई मेरो भान्छाको नल बदल्न प्रयोग गरें। स्थापना सजिलो थियो। एकल ह्याण्डलले पानी कुनै पनि ठाउँमा बन्द गर्न सक्दछ कि तातो वा चिसो जस्तो डेल्टाले बनेको पुरानो नलको विरोध गर्दछ, जहाँ पानी केवल क्यान्टर स्थितिमा ह्यान्डलको साथ बन्द गरिएको छ। तपाईं पज गर्न स्प्रे वा सिधा र एक बटन चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सफा गर्न सजिलो बनाउने सि s्कमा जहाँसुकै फुटबल हटाउन सक्नुहुन्छ।
विचार मा यो एक मूल्यवान उत्पादन हो। यो ब्रश निकल, स्टेनलेस स्टील जस्तै केहि संग बनाएको। नलको बारेमा मलाई मनपर्ने एक कुरा यो हो कि त्यहाँ विस्तारित नली हुन्छ जुन तपाईं बहु प्रयोग उद्देश्यको लागि तल तान्न सक्नुहुन्छ। ह्यान्डल सहज छ। ट्युबिंगमा प्रयोग गरिएको राम्रो सामग्री।
यो अब केहि महिना को लागि स्थापित छ र यो आश्चर्यजनक काम गर्दछ। तिनीहरू स्थापना गर्न धेरै सजिलो थियो। पुरानो हटाउन गाह्रो समय थियो। यो एक मिनेटमा स्थापित भएको थियो र त्यस बेलादेखि राम्रो काम गर्दैछ।
म मेरो नयाँ नल संग धेरै प्रभावित छु! स्थापना सरल थियो र पेशेवरलाई कल गर्न आवश्यक पर्दैन। म यसको बारे सबै कुरा मनपर्दछ, डाउन स्प्रेयर तान्नुहोस्, उचाई, मेरो पानीको चाप तीव्र रूपमा वृद्धि भयो! म खाना पकाउँदा पूरै ब्लास्टलाई परिवर्तन गर्न सक्दिन किनकि मैले ठूलो गडबड बनाउने थिएँ! तिनीहरूसँग पनि विस्तारित वारेन्टी छ जसले केवल उनीहरूको आफ्नै उत्पादमा उनीहरूको विश्वास प्रमाणित गर्दछ।
बेकार निर्देशहरूको साथ, एकदम सजिलो स्थापना; साथै सबै निर्देशनहरू पठाउन नसक्ने हुन सक्छ। कि संग एक धेरै राम्रो मूल्य मा वास्तव मा राम्रो नल भनिन्छ।
यो भान्छाको नल प्रयोग गर्न सजिलो छ। गुणस्तर पनि धेरै राम्रो छ, पानीको बहावलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो छ। यो प्रयोग गर्न धेरै सुविधाजनक छ, मलाई यो धेरै मनपर्दछ।
स्थापना गर्न प्लम्बर प्रयोग गर्नुहोस् किनभने मसँग पुरानो नल हटाउनको लागि विशेष उपकरणको अभाव थियो। मलाई यस नलको सहज अपरेशन र गुणवत्ता मनपर्छ।
एक *** ई2020-07-26
नल उच्च टेक हो र राम्रोसँग काम गर्दछ, डोरीहरू विस्तार गर्ने क्षमताले यसलाई अझ धेरै मूल्यवानको साथै सफाईको लागि उपयोगी बनाउँछ। बनेको सामग्री प्रीमियम गुणवत्ताको हो र म यस नलमा कुनै त्रुटिहरू फेला पार्न सक्दिन। म यसलाई माया गर्छु!
एच *** s2020-07-27
यस नललाई माया गर्नुहोस्। म मेरो भान्साकोठामा फेरि काम गर्दैछु र एक नयाँ नल सूचीमा उच्च थियो। यो नल मैले खोजिरहेको कुरा मात्र भएको छ।
मेरो हालको नल पुरानो र पुरानो देखिएको थियो, तर म यसलाई बदल्न एक टन खर्च गर्न चाहन्न। नलहरू र फिक्स्चरहरू र मूल्यवान हुन्छन्, तर यो धेरै यथोचित मूल्य थियो र धेरै उच्च मूल्य विकल्पहरूको भन्दा धेरै राम्रो देखिन्छ। स्थापनाले मलाई थोरै समय लिए, तर समग्रमा यो उत्पादनसँग अत्यन्तै खुशी भयो।
एच *** म2020-07-30
मेरो लाइनहरु विस्तार गर्नु पर्ने थियो तर पुरानो घरमा। उत्पादन राम्रो थियो तब मैले सोचें। त्यस पछि राम्रो एउटा मैले हार्डवेयर स्टोरबाट अर्को सिink्क किनेको हो।
एम *** ई2020-08-04
निर्देशनहरू अलि बढी स्पष्ट हुन सक्दछ तर केही युट्युब भिडियोहरूले मद्दत गरे। मसँग पहिले कुनै प्रयोग थिएन र रिन्चको साथ कालो आँखा लिन म सफल भएँ तर राम्रो देखिन्छ। केहि महिना को लागी प्रयोग गरीरहेको छ र कुनै मुद्दा छैन।
म यो नल संग धेरै खुसी छु! स्थापना गर्न धेरै सरल र सीधा। राम्रो काम गर्दछ र केहि सस्तो लाग्दैन। राम्रो देखिन्छ र अद्भुत काम गर्दछ! अत्यधिक सिफारिश!
यो धेरै राम्रो र स्थापना गर्न सजिलो छ, र the्ग जस्तै, यो मेरो भान्साको मेरो टाइलसँग मेल खान्छ।
जी *** s2020-08-11
स्थापित गर्न धेरै सजिलो मलाई मन पर्छ कि यससँग //3 ′ पाइपिंग छ त्यसैले यसबारे चिन्ता वा क्याल्शियमको साथ ब्लक गर्ने चिन्ता लिनुहुन्न किनकि नयाँ पानी बचाउने फिक्स्चरले धेरै गर्दछ।
मसँग पुरानो भान्छाको नल छ, र म यसलाई बदल्छु, म यो नललाई मनपराउँछु, स्थापना गर्न सजिलो छ तपाई यसलाई आफैं गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो मूल्य भएको पनि।
ठूलो आश्चर्य! मलाई नलको लागि डिजाईन, मन र प्रयोगको मन पर्छ। स्प्रेयरमा निर्मित महान छ !! मैले यो पनि याद गरें कि पानीको दबाव मेरो अघिल्लो नल भन्दा धेरै राम्रो छ जुन राम्रो आश्चर्य थियो।
स्थापना सजिलो थियो। म यो नललाई सिफारिस गर्दछ कसैलाई पनि यो खरीदको विचारमा।
मैले केहि दिनको लागि नल प्राप्त गरें। मेरो पतिले हिजो यसलाई स्थापित गर्नुभयो। धेरै साधारण स्थापना। यो राम्रो सम्झौता हो। हामीले यस नललाई हाम्रो भान्छाको सि le्कमा स्थापना गरेका छौं। हामीलाई यो मनपर्‍यो।
जी *** टी2020-08-18
पैसाको लागि अद्भुत नल !! हाम्रो लागि कुनै इन्सिलेशन समस्या छैन। महान र धेरै धेरै सजिलो काम गर्दछ।
म *** आर2020-08-20
न्यूनतम निर्देशनहरू स्थापना प्रक्रिया निश्चित गर्नका लागि सबै भागहरू राम्रोसँग जडान भएका छन् र सबै प्रकार्यहरू उत्कृष्ट छन्।
सी *** ई2020-08-22
यस नलको बारेमा छ महिना पहिले किन्नु भयो र यसले कसरी काम गर्दछन् भन्नेमा धेरै सन्तुष्ट भएको छ र यो धेरै राम्रो देखिन्छ
एल *** ई2020-08-25
मैले यो खरीद गर्नु अघि समीक्षा गरें। तातो रेखा अहिलेको भन्दा छोटो छ। कुनै समस्या छैन, हामी Ace मा एक विस्तार मिल्यो। प्रतिस्थापन गर्न यति सरल। यो राम्रो देखिन्छ, प्रवाह बलियो छ। म यो नल सिफारिस गर्दछु।
मूल्यको लागि राम्रो समग्र उत्पादन। नोजल सजिलै तल तान्न। हामीले प्लम्बर स्थापना गरेका थियौं किनभने हाम्रो प्लम्बिंग मन्त्रिपरिषद्को भित्ताको निकट थियो।
हामी सुरुमा निश्चित हुनुहुन्न किनकि हामीले यस ब्रान्डको बारेमा कहिल्यै सुनेका थिएनौं तर सबै महान समीक्षाका आधारमा प्रयास गर्ने निर्णय गर्यौं। हामी यस नल संग सुपर खुसी छौं। गुण राम्रो छ, राम्रो देखिन्छ, सुचारू रूपले बढ्छ, राम्रो मूल्य र ठूलो प्याकेजि।। हामीसँग अहिले यो लगभग एक महिना भयो र हामी सुखी हुन सकेनौं।
W *** मि2020-09-02
मैले मेरो पुरानो भान्छाको नल बदल्न आवश्यक छ र मलाई लाग्छ कि यो उत्तम विकल्प हो। यो मेरो पुरानोको लागि holes होल प्लेटहरूको साथ आउँदछ। Wowow पृष्ठ मा एक भिडियो स्थापित गर्न को तरिका सिकाउन छ। स्थापना १ minutes मिनेट जति मात्र लाग्छ। पानीको प्रवाह वास्तवमा सहज र बलियो छ।
म धेरै पिक्की हुँ, धेरै अनुसन्धान गर्दछु र नाम ब्रान्डको लागि जान्छन र रेखाको तल्लो भाग कहिल्यै हुँदैन, त्यसैले मैले यस अज्ञात-बाट-ब्रान्डको नाम मेरो ब्रान्डको प्रख्यात ब्रान्डको सर्टलिस्टमा थप्नु अघि केही राम्रो अनुसन्धान गर्थें। दुई भन्दा तीन गुणा लागतमा समान डिजाइन। दुई अन्य सरोकारहरू: १. केही समीक्षाले उल्लेख गर्दछ पुल डाउन पछाडि हट्ने छैन र ठीक ठाउँमा फिर्ता स्नैप भयो, बाँया झुकाव। त्यो वास्तवमै स्थापना मुद्दा हो। त्यहाँ एक वजन छ कि समायोजित गर्न आवश्यक छ, जो धेरै सजिलो छ, त्यसपछि यो उत्तम तरिकाले काम गर्दछ। २. र Color्ग - फोटोहरूले यसलाई ब्रश गरिएको स्टेनलेस स्टीलको खैरो र like्गको जस्तो देखाउँथ्यो तर यो ब्रश निकलबाट बनेको छ, जसमा न्यानो, खैरो र color्ग हुन सक्छ जुन मेरो चिन्ताले मेरो एसएस उपकरणसँग मेल खाँदैन। मैले त्यस पक्ष वा प्रश्नहरूमा उल्लेख गरेको कुनै समीक्षा पाउन सकेन, त्यसैले मैले आफैलाई प्रश्न सोधेँ र मलाई राम्रो उत्तरहरू प्राप्त भयो जुन मलाई आश्वासन दिन्छ कि यसको खैरो रंग छैन र स्टेनलेस स्टील उपकरणहरूको साथ राम्रोसँग काम गर्दछ। यो राम्रो सल्लाह साबित भयो, ती व्यक्तिहरूलाई धन्यबाद दिनुहोस् जसले मेरो प्रश्नको उत्तर दिनका लागि समय लिएका थिए, म निराश भएन। यो ठोस क्वालिटी उत्पादन हो, पुल डाउन र स्प्रे सुविधाको साथ डिजाइन अद्भुत छ, मेरो सिksक यत्तिको सफा कहिल्यै भएन! केवल म कुरा गर्न सक्दिन किनकि दीर्घायु हो किनकि यो केवल एक महिना मात्र भएको छ, तर प्राय: भान्साको नलको रूपमा, यो निरन्तर प्रयोगमा छ, र म यो अधिक महँगो ब्रान्डको रूपमा चल्ने छैन भनेर सोच्ने कुनै कारण छैन। राम्रो विकल्प, यसको लागि जानुहोस्, save बचत गर्नुहोस्, म stars ताराको साथ सिफारिस गर्न खुसी छु।
एच *** एन2020-09-15
मेरो वास्तविक समीक्षा पछि, ग्राहक सेवाले मलाई WOWOW रिटर्न विन्डोको पछाडि भए पनि गल्ती नल बदल्न सहयोग गर्न सम्पर्क गरे। उनीहरूको सहयोगमा म नल मर्मत गर्न सक्षम भएँ तर यस बीचमा उनीहरूले अभिव्यक्त फिर्ता पठाइदिए पनि यदि मैले पहिलोलाई ठीक गर्न सकेन भने समस्या यो थियो कि आन्तरिक ह्यान्डल म्याकेनिज्मले हेण्डललाई तापमान समायोजनको लागि छेउको अर्को छेउमा जान अनुमति दिन्थ्यो तर पानी प्रवाह खोल्न माथि र तल होइन। पूर्ण रूपमा कार्य गर्नको लागि यसलाई अलग राख्नुपर्‍यो र पुनः सिट गर्नु आवश्यक पर्‍यो। नलले अब आशा गरे जस्तो काम गर्दछ र हेर्नुहोस् जुन म चाहन्थें ठ्याक्कै त्यस्तै छ। यस कम्पनीको ग्राहक सेवाका लागि stars तारे!
मूल: यो नल सुन्दर छ र मूल्य सही थियो, दुर्भाग्यवस यसले काम गर्दैन। पानी बाहिर आउँदैन। तातो / चिसो बीच स्विच गर्न ह्यान्डल एक छेउमा सर्छ तर नल खोल्न माथि र तल सर्दैन। मैले पानी नभएको सम्बन्धमा अन्य टिप्पणीहरू र प्रश्नहरू देखेको छु त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो केहि आईटमहरूमा सम्बन्धी मुद्दा हुन सक्छ। सबै जडानहरू सही रूपमा काटिएको थियो र आपूर्ति लाइन भल्भ सकृय भएको छ। पानी रहेको र उपलब्ध रहेको थप प्रमाणको रूपमा मैले नल बिच्छेदन गरेपछि नलीबाट पानी खसेको मैले याद गरें। मैले भर्खरै पूरा गरेको मेरो धुलाई कोठाको रिमोडलको लागि दुई महिना अघि खरीद गरेकोले म अत्यन्त निराश छु कि म यो सुन्दर नल प्रयोग गर्न सक्दिन र अब फिर्ती विन्डो समाप्त भएको छ जस्तो देखिन्छ कि म योसँग अडकिएको छु।
हाम्रो भान्साको नल भर्खरै मरे र हामीले यो नललाई प्रतिस्थापनको रूपमा आदेश दियौं, उत्साहित छ कि हामीले यसलाई तुरुन्तै प्राप्त गर्नेछौं र यसलाई यस साताको अन्त्यमा स्थापना गर्न सक्षम हुनेछौं ताकि हामी हाम्रो भान्सा सिink्क प्रयोग गरेर पुनःसुरु गर्न सक्नेछौं। जे होस्, जब हामीले बक्स खोल्छौं, हामीले तत्काल नलको लामो स्टेम भागमा समाप्तमा एउटा ठूलो स्क्र्याच देख्यौं। यो निश्चित रूपमा QC मुद्दा हो किनकि स्क्र्याच अन्ततः रस्ट हुनेछ, उल्लेख नगर्नु यो वास्तवमै नराम्रो देखिन्छ। हामी अत्यन्त निराश छौं किनभने हामीले अर्को भित्तामा नपुगुञ्जेल अब हाम्रो भान्छाको सिinkको केही प्रयोग छैन। यो ठूलो असुविधा हो। म यो कुरा विश्वास गर्न सक्दिन कि उत्पाद प्याकेज र शिप हुनु अघि क्वालिटी जाँचको बेला यस्तो समातिएको थिएन! हामी निराश छौं किनकि हामी वास्तवमै यस भान्साको नल स्थापना गर्नका लागि उत्सुक छौं र हाम्रो सिink्क अप गर्दै फेरि चालू भएको छ!
अद्यावधिक: हाम्रो पूर्वावलोकन १ देखि stars ताराहरूबाट अपडेट गरियो किनभने हामीले हाम्रो प्रारम्भिक समीक्षा पोष्ट गरेपछि उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्राप्त भयो। WOWOW को सब भन्दा राम्रो ग्राहक सेवा हुनसक्छ हामीले कुनै पनि कम्पनीबाट प्राप्त गरेका छौं। उनीहरूले हामीलाई चीनबाट DHL कुरियर मार्फत एक दोष मुक्त नल पठाए जुन केहि दिन भित्र आईपुग्यो र सानो डेक प्लेट पनि चीनबाट DHL मार्फत। एकचोटि हामीले नल स्थापना गरेपछि हामीलाई वास्तवमै यो मनपर्‍यो, उत्कृष्ट देखिन्छ र सुन्दरताले काम गर्दछ। फेरि, WOWOW वास्तव माथिको र बाहिर जानु भयो यस परिदृश्यलाई हाम्रो लागि सही बनायो र हामी उनीहरूको ग्राहक सेवाबाट धेरै प्रभावित भयौं।
यो नल एक १ year बर्ष पुरानो "ब्रान्ड नाम" एकल ह्यान्डल एकाईको लागि पुल-डाउन स्प्रे हेडको साथ प्रतिस्थापन हो। यस नलको नल शरीरमा भल्भ सम्मेलनहरूमा चुहावट सुरु भएको थियो र म ती मर्मत गर्न कोशिस गर्न चाहन्न। २. - - hours घण्टा पुरानो युनिट निकाल्दै ... खण्ड र स्ट्रिप गरिएको थ्रेडहरूले कामको यस अंशलाई झन्डै अनावश्यक बनायो। त्यो र पुरानो एकाईको खराब मेकानिकल डिजाइनले धेरै रगत, पसिना, र मेरो तर्फबाट आँसुको लागि बनाईएको थियो।
यसको विपरित, नयाँ नल स्थापना गरियो र 35 XNUMX मिनेटमा परीक्षण गरियो। तातो र चिसो इनपुटको लागि दुई थ्रेडेड जडानहरू र नलको लागि इन्टरफेस सिंक गर्नको लागि एउटा ठूलो थ्रेडेड जडान ... भोईला, भयो।
निश्चित हुनुहोस् र तातो / चिसो इनपुट जडानहरूमा टेफ्लन सील टेप थप्नुहोस्; यो प्याकेजि in मा समावेश छैन। निर्देशन बाहिरी मंगोलियनलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरिएको जस्तो देखिन्छ जुन संस्करणमा लेखिएको हुन्छ जुन व्याकरण स्कूलका कुनै शिक्षकमा सेरेब्रल पग्लन्छ, जस्तै "स्थापना समाप्त हुन्छ र परीक्षा लीक हुन्छ वा हुँदैन।" धन्यबाद यो चित्रण धेरै राम्रो गरीयो मौखिक भागहरु अनावश्यक… तर अझै रमाइलो छ।
सबै प्याकेजिंगमा समावेश थियो (सील टेप बाहेक); एस्कुटचेन प्लेट, अतिरिक्त ग्याकेटहरू, एलन रिन्च, र //3 देखि १/२ एडेप्टर तातो / चिसो जडानहरूको लागि (यदि आवश्यक भएमा)
यी सबै पछि नयाँ नल एकदम कार्यशील छ र पुरानो भन्दा एक धेरै राम्रो देखिन्छ सुधार भनिरहेको छ। म यसलाई अत्यधिक सिफारिश गर्दछु र थप्न चाहान्छु कि मूल्य ब्राण्ड समकक्ष भन्दा than 75 - $ 100 कम थियो। यदि यो एक यो प्रतिस्थापित सम्म लामो हुन्छ भने, म धेरै खुशी हुनेछु।
B *** ई2020-09-24
म मेरो नयाँ नल संग धेरै प्रभावित छु! मलाई गम्भीर आवश्यक्ता थियो र नलको बारेमा केही थाहा थिएन, केवल केही मुट्ठी ब्रान्ड नामहरू। मेरो अनुसन्धानमा मैले WOWOW पाए र सबै समीक्षा अपवाद थियो। मलाई थाँहा मात्र थाहा थियो कि ती प्रसिद्ध ब्रान्ड भन्दा १०० डलर कम थिए त्यसैले मैले प्रयास गर्नु पर्‍यो। स्थापना सरल थियो र पेशेवरलाई कल गर्न आवश्यक पर्दैन। म यसको बारे सबै कुरा मनपर्दछ, डाउन स्प्रेयर तान्नुहोस्, उचाई, र मेरो पानीको चाप तीव्र रूपमा वृद्धि भयो! म खाना पकाउँदा पूरै ब्लास्टलाई परिवर्तन गर्न सक्दिन किनकि मैले ठूलो गडबड बनाउने थिएँ! मलाई भन्नुहोस् जब होम डिपोसँग ठूलो बिक्री हुन्छ days दिन पछि मैले मेरो नयाँ नल स्थापना गरेपछि पनि मलाई हेर्न प्रलोभनमा थिएन। तिनीहरूसँग पनि विस्तारित वारेन्टी छ जसले केवल उनीहरूको आफ्नै उत्पादमा उनीहरूको विश्वास प्रमाणित गर्दछ।
वाह पॉट फिलरले निकेल ब्रश गरे
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस चीन ठेगाना: ११ T थ बर्थ, पहिलो फ्लोर नम्बर २११ यानज्या East पूर्वी रोड शुई कउ टाउन काई पिंग शहर गुवा Dong डो Dong प्रान्त चीन +86 19927601787918 २8१XNUMX (am बिहान XNUMX -१ pm बेलुका GMT +)) इ-मेल: বিক্রয়@wowowfaucet.com
प्रतिलिपि अधिकार © २०२०-२2020२ W WOWOW INC। सर्वाधिकार सुरक्षित।
यसलाई नछुटाउनुहोस्: किन्नुहोस् १ प्राप्त गर्नुहोस् १ मा १०% छुट खारेज